News - Cerebrity နံမည်ကြီးချင်သလား နံက်စာဖြစ်ချင်သလား
မတစ်ထောင် ငါသာဖွား ... ငါဟဲ့ Ryan Alexiev...
နံမည်ကြီးချင်တဲ့ celebrity ဖြစ်ချင်ရင် ကဲကွာ.. လာလေရော့ နံနက်စာ cereals ဖြစ်စေ...
Ryan Alexiev ဆိုသူ ပန်းချီပညာရှင်သည် နံမည်ကျော် ပုံတူကို နံနက်စာ Cereals အရောင်စုံများဖြင့် ပုံတူဖန်တီးခဲ့ပြီး ဆန်ဖရန်စစ္စပြပွဲတွင် ပြသခဲ့ပါသည်။
ပုံတူ ပန်းချီများ ကြည့်၍ ဗိုက်ဆာကြပါကုန်..
အသင်ရော နံနက်စာ ဖြစ်ချင်ရင် သို့ မဟုတ် နံမည်ကြီးဖြစ်လိုလျှင် အကျွန်ုပ် ဂျေထံဆက်သွယ်၍ Cereals အဖြစ် အ၀ါးခံရန် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
လိပ်တက် ယုန်တက် သိုးတက် အကုန်တက် လီမီတက် နံနက်စာ နံမည်ကြီး အေဂျင်ဆီ
နေရာ - ကွန်ပျူတာ ရှေ့ 
Posted by ထွန်း at 17:200comments
My truth about why I do blog
ကိုဆန်းဦးရေး တဲ့ စာတွေဖတ်တာ တကယ်ကို မှန်တာဘဲ ပြောင်းလဲနေတဲ့ လက်ရှိခံစားနေတဲ့ အခြေနေကို ထွက်ပေါက်ရှာလို့ ရေးတာ တကယ်ပါ
တချို့ ကပြောပါတယ် အမြဲပျော်နေတတ်သလား စိတ်အေးအေးနဲ့ သာယာချမ်းမြေ့နေသူလား လောကကြီးကို အလျားသင့် အလိုက်သင့် နေနိုင်သူလားတဲ့ ဖြေချင်ပါတယ်
ဖန်တီးရှင်ရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ဖန်တီး အရာဟာ လုံးဝဆန့် ကျင်နေပါတယ်။
အဆင်မပြေတာတွေချည့် ဖြစ်နေလို့ စိတ်ချမ်းသာစရာ တွေဘဲ ရီစရာ ပျော်စရာတွေ ချည့် တင်နေတာ
ခုရေးရကျိုးနပ်တယ်ဆိုရမယ် ဧည့်သည်တွေဆီ သွားလည်ရင်း မှ တဆင့် တဆင့်နဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့စာတွေ ဖတ်ရတယ် ခုတော့ ပို့ စ်တွေ ဘလောက်တွေ စုစည်းနေပါတယ်။ ဖိုးဝရဲ့ စိတ်ကူးလေးကမှန်တယ် ပြန့် နေတဲ့ ဗဟုသုတတွေကို စုစည်းထားရင် ကောင်းမှာဘဲလို့ ။
စာရေးသူရဲ့ ပို့ စ်တွေဖတ် ပြီး စာရေးသူရဲ့ ဘ၀ခံစားချက်ကို မှန်းဆနိုင်ပါတယ် ကြိုပြောလိုက်မယ်နော် ဆန့် ကျင်ရာ ဘက်က တွေးမှမှန်လိမ့်မယ်... စိတ်ပညာ အရ ပေါ့.. သာမန် စာဖတ်ပြီး အကဲခတ်ရင်တော့ မှားသွားလိမ့်မယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခေတ်ပညာတတ် တယောက်ဟာ သူ့ ခံစားချက်ကို တည့်တည့် မပြောဘူးဆိုတာ သတိပြုစေချင်ပါတယ် ရှားလော့ဟုန်း အဲမှားလို့တက်လော့ဟုန်း (ဘာလာခေါက်) ကတွေးသလို တွေးကြည့်ရင် ကိုဆန်းဦး(မန်း အဲမ်စီစီ) ပြောသလို ပေါ့...
နောက်မှ ထပ်ရေးတော့မယ် (03/09/07)
Posted by ထွန်း at 09:012comments
မနက်က စိတ်ကူးထားခဲ့သော အကြောင်းလေးများသည် ညဘက် ဆီပုံးတွင် ရေးခဲ့သော အလွမ်းအိမ် ရဲ့ (စားစရာတွေက တယ်ကောင်းပါလား။ ဘဲပေါင်းတောင်စားချင်လာပြီ။) ဆိုသော မှတ်ချက်လေးကြောင့် တိုက်ဆိုင်သဖြင့် ယခုကဲ့သို့ရေးဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။
တကယ်တမ်းကျတော့ အထက်က ပြောတာနဲ့ရေးချင်တာ မတူဘူးဗျ။ ဘဲဆို လို့ ဘဲဖမ်းပွဲသတိရသွားလို့ ထဲ့ရေးတာ
Posted by ထွန်း at 18:210comments
Happy Birthday Ko Yan Aung & BarNyar
Birthday BOY ကိုရန်အောင် နှင့် Birthday GIRL ညီမလေး ဘာညာ
၏ ယနေ့၈.၁၁.၂၀၀၇ တွင် ကျရောက်သော ၁--နစ် မွေးနေ့ မင်္ဂလာမှ သည်
သက်ဆုံးတိုင် အောင်မြင်မှု့ များ စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ချမ်းသာခြင်း များဖြင့် ပြည့်စုံပါစေသောဝ်
ဆီမီးက ဘုရားအတွက် ရည်စူးပြီး အာရုံဏ်ပြု ပြီး ကိုယ့်အတွက် ဆုတောင်း
ပုဂံသေးသေးက ဘုရားအတွက် ဆုတောင်းဗျာ
ဘဲသားပေါင်း ထမင်းနဲ့ ကြက်အရေခွံကြော်
ခင်ဗျား အတွက် ကျုပ်က ဥပုသ်နဲ့ မို့ လို့ မသောက်ဘူး (ညီမလေး သောက်နိုင်ရင် သောက်ပေါ့)
နောက်ဆုံးပိတ် က မုန့် ဗျာ
ကဲ ကျုပ်အလုပ်သွားတော့မယ် ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ
Posted by ထွန်း at 07:28 1 comments
အရေးပေါ် သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်
ဘလော့ရေးခြင်း ခေတ ရပ်နားပါမည်။ အကြောင်းမှာ ဗီဒီယိုတင်မိရ်ျ ဥပုသ် ကျိုးသွား သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ စာမေးပွဲပြီးသော အခါတွင် ပြန်လည် ရေးသားပါမည်။
သို့ သော် စာရေးသူ၏ ပျောက်နေသော ဆီပုံးအတွက် ပညာရှင်များအနေဖြင့် ကူညီပေး စေလိုပါသည်။ မြေခွေးဖြင့် ကြည့်လျှင် ဆီပုံးမြင်ရသဖြင့် မှာတမ်းချွေခဲ့ ပေးစေချင်ပါသည်။ လာလည်သူများ အားလုံးကို ပြန်လည် ဖြေကြားပါမည်။
Posted by ထွန်း at 23:220comments
မမြင်ရရင် လင့် ကို တိုက်ရိုက်နှိပ်ကြည့်ပါ
ရော့အဲန်ရိုးလုပ်မိလို့ဥပုသ်တပါးကျိုးပြန်ပြီဗျ
Posted by ထွန်း at 21:360comments
၂၇. ကဲ ၆.၁၁.၀၇မှာ ပိုးစင် (ဖိုးဇင်)ရဲ့ အိမ်လေးကိုသွားလည်တယ်။ သူက ရေနဲ့ လေလို ကျင့်ကြံတယ် အရောင်အသွေးမရှိတဲ့ ဘလော့လေးပါတဲ့ ဟုတ်တယ် တကယ့် တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာတွေနဲ့ တန်ဆာဆင်ထားတာ။ အမယ်တယ်ဟုတ်ပါလား ချစ်သူကောင်မလေးနှင့် စကားပြောရ သည်ကို စိတ်ဝင်စားသည်တဲ့ အင်း အိမ်ထောင်ကျသွား ပြီးလဲ ချစ်သူ ကောင်မလေးနှင့် စကားပြောရသည်ကို... အင်း ဆက်မတွေးတော့ဘူး တော်ကြာ ကျုပ်ပါ အဆစ်ကြံရာပါ ဖြစ်မှာစိုးလို့ပြေးထွက်လာရတယ် (ဟတ် ဟတ် .. ဆင်စွယ်နောက်တဖီး နဲ့ တလုံးထပ် စရံသတ်ပါ့မယ် ဆီပုံးလေးပျောက်တာ ဆက်ရှာပေးပါဗျာ )
နောက် ထပ် လာ မည် မျှော် ပါ ။ ရင်ခုန်ခြင်း များစွာဖြင့် စောင့်မျှော်နိုင်ကြပါသည်။
Posted by ထွန်း at 20:14 1 comments
အမိန့် တော် ထုတ်ထားတာလဲ ကယ်တင်ရှင် မပေါ်သေးဘူး စိတ်ညစ်တယ် ဗျ
ကယ်တင်ရှင် အလိုရှိသည် အမိန့် တော်
ဘလော့ကာ ပြည်သား လူအများတို့ လေး.....
အိုင်အီးထဲတွင် အကျွန်ပ်၏ ဆီပုံးကို ရှာဖွေ
ဆင်စွယ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ......
တလုံး၊ တဖီး၊ တခိုင် ကြိုက်ရာရမည်။
အမ်တီဂျေက (ကျုပ်နံမည် ပါသောကြောင့်) လာရောက် အားပေးကာ ရီ သွားသဖြင့် (မဂျွိုင်းနိုင်သူ ဟုပြောသွားသည့်အပြင်
ကောင်းကင်ကိုက (စီပုံးထဲဝင်ပူးသော သရဲသည် မြေခွေးသာကြောက်ကြောင်း) အတင်းတုတ် သဖြင့် ကျွန်ပ်၏စီပုံးအား အမြန်ဆုံးနှန်းဖြင့် အပူတပြင်း ရှာဖွေနေရပါကြောင်း။
ခုကြည့်လေ ကျုပ်ရဲ့ ဆီပုံး ဘယ်သူ ဖျောက်ထားလဲမသိဘူး။ အခု စုံထောက်ကျော် ၅ဦးကို ချဉ်းကပ် ထားရတယ်။ စုံထောက်ကြီးများက မအားသေးလို့ တဲ့ ကျုပ်လဲ လူစစ်စစ် ဖြစ်သော်ငြား လည်း ပြာနေပြီ။
- မသင်္ကြန်ကို ဆင်စွယ် တစ်လုံး ဖြင့် စရံသတ်ကာ ချည်းကပ်ထားပါသည်။
- စုံထောက်ကိုဖီးနစ် ကို ဆင်စွယ် တဖီး အော်ဒါ မှာပေးထားပြီး ချည်းကပ်ထားပါသည်။
- စုံထောက် ကိုရန်အောင်အား ဆင်စွယ် တခိုင် အစဉ်သင့် ဘုတ်ကင်လုပ်ပြီး ချဉ်းကပ်နေပါသည် (သို့ သော် စုံထောက်ကြီးမှာ သီတင်းကျွတ် ချိန်တွင် မကျွတ်နိုင်ဘဲ ကြွတ် နေ ပါသောကြောင့် စောင့်ဆိုင်းနေရ ပါသည်)။
- စုံထောက် ကိုဈာန်မှာ သီတင်းကျွတ် အမှီ ဈာန်လျော ပြီး အလုပ်များနေသော ကြောင့် တိုကင်နံပါတ်များ ကို အရှေ့ မှ တစ် နှင့် သုံည သုံည တိုးသဖြင့် စာရေးသူ၏ ဘွတ်ကင် နံပါတ်မှာ ၁ ဘ၀မှ ဈာန်လျောကာ ၁၀၀၁ ဖြစ်သွားပါသဖြင့် စောင့်စားနေရပါသည်။
- စုံထောက်ကြီးကိုမောင်လှ ကို ဆင်စွယ်ပြသော်လည်း နက်ပြသနာကြောင့် သတင်းမရပါချေ။
- ထိုအတောအတွင်း ဒေါက်တာ မွန်း၊ ၀င်္ကဘာ၊ ခွန်မြလှိုင်၊ မီးလေး၊ နှင်းပွင့်လေး တို့ မှာ မရှာပေးနိုင် သော်လည်း ဆင်စွယ် လာတောင်းသဖြင့် ဆင်စွယ်တလုံးစီ ပေးအပ်ထားပါသည်။
သို့ သော် ယခုထိ ဆီပုံး သတင်း ကို မသိရသေး သဖြင့် စာရေးသူ စိတ်ညစ်နေပါသည်။
ထို့ အပြင် စုံထောက်ကြီး ရန်အောင်မှာ သူ၏ ဒုခိတသရဲ၊ သရဲအစွမ်းမရှိသောသရဲ၊ ညသရဲကို ကြောက်သောသရဲ၊ စက်ဘီးငသိုသရဲ အကြောင်း သတင်းဖော်ထုတ် မိသဖြင့် စာရေးသူအား လုံအောင် နေမှ လွတ်မည် ဟု ကြိမ်းဝါး နေပါသည်။ အပေါ်ခံရန် မဖြစ်နိုင် သဖြင့် လုံအောင် နေနေ ရပါသဖြင့် ပိုရ်ျ စိတ်ညစ်ပါသည်။
Posted by ထွန်း at 20:516comments
ဌာနမှုးကြီး အခြောက်ခံရပြီးသည့်ချိန်မှ စရ်ျ နစ်စဉ်နစ်တိုင်း သင်္ကြန်တွင် ဒုလာဘရဟန်းပြုခြင်း အလျှုလုပ် အမျှဝေခြင်းလုပ်ရာမှ ၁၉ရာစုနစ်မကုန်ခင် သင်္ကြန် အလျှုတွင် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးမှာ တရားမဟောဘဲ ဆိတ်ဆိတ်ထိုင်နေသဖြင့် ဒုတိယကျောင်းထိုင်မှ တရားဟောခြင်းပြုခဲ့ရပါသည်။ နောက်ပိုင်းသိရသည်မှာ ဆရာတော်သည် ပရိသတ်ကြားတွင် ရှိသော မမြင်အပ်သော အရာက ကျွတ်လွတ်သွားကြောင်း လာရောက်နှုတ်ဆက်သဖြင့် ယင်းအား တရားဟောခြင်းပြုနေသောကြောင့် ဟုသိရပါသည်။ ၁.၁၁.၂၀၀၇
Posted by ထွန်း at 05:383comments
True story - Unisex author
(စာဖတ်ပြီးသူအားလုံး ပြူးကျယ်သွားမယ် ထင်ပါတယ်။ ပြူးခဲ့ရင် ပြူးလက်စ နဲ့ နောက် တခေါက် ဘလော့ ကို အစအဆုံး လေ့လာလိုက်ပါ။ ပြူးနေသည့် မျက်လုံး အစုံမှ ထွက်လာသော မျက်ရည်နှင့် ကျယ်နေသော ပါးစပ်မှ ထွက်လာသော အသံများအတွက် တာဝန်မယူပါ)
Posted by ထွန်း at 06:273comments
News - Dance dance dance!
တချို့ က ဗီဒီယို ကို မမြင်ရဘူးပြောတယ်။ ဒီမှာ လင့် ရေးထားပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
Posted by ထွန်း at 21:463comments
True story - Urgent Your duty! သင် တာဝန်ကျေရဲ့လား
ယခုဘလော့ကို လာလည်သော သင် တာဝန်ကျေရန် လက်မှတ်ထိုးကြပါ။http://www.petitiononline.com/untroops/petition.html
ရန်ကုန်ဆေးရုံမှ လူနာများအတွက် သွေးလိုအပ်နေပါကြောင်း
သင် ဗုဒဘာသာဖြစ်ပါသလား သင် မြန်မာ (တိုင်းရင်းသားအားလုံး) ဖြစ်ပါသလား မြန်မာ နိုင်ငံသား သို့ မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံမှ မျိုးဆက် ဖြစ်ပါသလား။
အမြန်ဆုံး လက်မှတ်ထိုးကြပါ။ သင်တို့ ၏ နိုင်ငံခြားသား မိတ်ဆွေများကိုပါ လက်မှတ် ရေးထိုး ပေးရန် အကူညီတောင်းပါ။
အီးမေးထဲမှတဆင့် ပြန့် ပွားစေလို ပါသည်။
တာဝန် ကျေ စေ ချင်ပါသည်။
Posted by ထွန်း at 04:050comments
ဒီပို့ စ်ကို ရေးဖို့ အစီစဉ်မရှိပါဘူး ယနေ့ ဖော်ဝဒ် ရောက်လာတာပါ။ မေးထဲမှာ အကြိမ်၂၀ ဖြန့် ခိုင်းတယ် ။ ထုံးစံ အတိုင်းပေါ့ မဖြန့် ရင် ဘာညာ ကွိကွ ပေါ့. chain mail လို့ ခေါ်ပါတယ်။ စာရေးသူအနေနဲ့ ဓါတ်ပုံတင် ရခြင်း အကြောင်းမှာ မဟာပိနဲက အနီရောင် ပြောင်းနေသော ကြောင့် စာရေးသူတို့ အတွက် ကယ်တင်ခြင်း ဖြစ်ကောင်းရဲ့ အမြင်ဖြင့် တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မေးလ်ထဲမှာ မဟာပိနဲပုံ ပါလာလို့ကြုံကြိုက်လို့ သတိရသွားတာ ......
ပြောချင်တာက ၁၉၉၅ (မတ်လ ထင်တာဘဲ) လောက်မှာ အိဒိယ နိုင်ငံ ဟိနဒူဘာသာဝင် တဦးဟာ အိမ်မက် အရ မဟာပိနဲလို့ ခေါ်တဲ့ ဆင်ဘုရားကို နွားနို့ ဆွမ်းကပ်ရင် အမှတ်တမဲ့ နွားနို့ ကို ဆင်နှာမောင်း နှင့် ထိပြီး ဆွမ်းကပ်လိုက်ပါတယ် ။ ရုပ်ပွားတော် ဆင်နှာမောင်း က နွားနို့ ကို စုပ်ယူသောက်သုံးလိုက်တာ တွေ့ ရှိရတာနဲ့ တကမာလုံးသတင်း ပြန့် သွားပြီး ဟိနဒူ ဘုရားကျောင်း တွေ မှာ လူတိုင်းသွားရောက် နွားနို့ ဆွမ်း ကပ်ကြပါတယ်။
ဆင်ဘုရားတင် မဟုတ်ပါဘူး။ ရှိသမျှ ကျောက်နဲ့ ထွင်းထားတဲ့ သစ်သားနဲ့ ထုထားတဲ့ ဘုရားမျိုးစုံ နဲ့ အစောင့် တိရိစာန် တွေအားလုံး ဟာ သူတို့ ပါးစပ်၊ နှာမောင်း ကို နွားနို့ ၊ ရေ ကပ်လိုက်တာနဲ့ကပ်လိုက်သော နွားနို့ ၊ ရေ၊ ဖျော်ရည်တွေ ဟာ မင်စုပ်စကူက ရေစုပ်ယူသလို ကုန်သွားတာ မျက်မြင် ကြုံတွေ့ ကြရပါတယ်။ ဒါဟာ ဘုရားကျောင်းမှာမှ မဟုတ်ပါဘူး ဟိနဒူလူမျိုးတွေ ရဲ့ နေအိမ်မှာ စမ်းသပ်တာလည်း သောက်သုံးကြောင်း အံ့သြဘွယ်ရာ တွေ့ ရပါတယ်။
သဘာဝလွန် ဖြစ်ရတဲ့ ကျောက်ရုပ်ထု၊ သစ်သားရုပ်ထုတွေ က နွားနို့ ဆွမ်း၊ ရေဆွမ်း သောက်သုံးတာ ကမာအဆက်ဆက် မကြားဘူးကြပါဘူး။ သောက်သုံးမှု က လည်း မြန်ဆန်ပါတယ်။ လဘက်ရည်ဇွန်းနဲ့ တိုက်ရင် စကန့် ၃၀ အတွင်း နွားနို့ ၊ရေ တွေဟာ ထိကပ်ထားတဲ့ ပါးစပ်၊နှာမောင်းဘက် တိုးဝင် ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် နွားနို့ ဆွမ်း ရေဆွမ်းများကို ဘုရားရုပ်ထုသာ မက ဘုရားကျောင်းဝန်းအတွင်းရှိ ရှိသမျှ သော ရုပ်ထုများကို ကပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ ကြောင့် မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ခဲ့သဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အဲဒါကလည် ရက် အကန့် အသတ်ရှိ ပါတယ်။ မှတ်မိသလောက် ဟိနဒူ လပြည့် ပွဲတော်အထိ သောက်သုံးမယ် ဆိုတာ ကြိုပြောထားတဲ့ အတိုင်း နောက်တရက်ကူးတာနဲ့ တပြိုင်နက် မည်သို့ မျှ မသောက်သုံးတော့တာ တွေ့ ရပါတယ်။
ထို အချိန်မှာ လူတိုင်းနွားနို့ ဆွမ်းကပ် ကြတာကြောင့် နွားနို့ ဝယ်လို့ မရတဲ့ အခြေနေတောင် ရောက်ရှိ သွားရပါတယ်။ ဟိနဒူလူမျိုးတွေ အနေနဲ့ မည်သို့နိမိတ် တန်ခိုးများပြတယ် ဆိုတာ မပြောတတ်ပေမဲ့ သိပံပညာရှင်တွေ က မျက်မြင်သက်သေ ကို သိပံနည်းနဲ့မဖြေရှင်း ခဲ့နိုင်ကြပါဘူး။
နောက်မှ ထပ်ကြိုးစား တင်ကြည့်ပါအုန်းမယ်
Posted by ထွန်း at 19:100comments
Posted by ထွန်း at 07:30 1 comments
Posted by ထွန်း at 00:060comments
News - Model BOYS
စာရေးသူ၏ အကိုကြီး သည် ငယ်စဉ်အခါကထဲက သပ်သပ်ရပ်ရပ် နေတတ်သူ တဦးဖြစ်သည်။ အလှအပ အလွန်ကြိုက်သူလည်း ဖြစ်သည်။ တနေ့ သော အခါတွင် ဂျပန်လူမျိုး သူငယ်ချင်းနှင့် ရင်းနီးပြီး အလွန်ခင်မင်သွားခဲ့သည်။ ထိုသူမှာ မျက်နှာတွင် မုတ်ဆိပ်မွှေး ပုသိုင်းမွှေးများဖြင့် ပြည့်နက်နေရာ မျက်နှာတွင် မျက်လုံး နှာခေါင်းသာပေါ်လွင်ပြီး ပါးစပ်နှင့် မျက်နာ အောက်ပိုင်း တခြမ်းမှာ ထူထဲသော အမွေးများဖြင့် ဖုံးအုပ်နေသည် ကိုသာ တွေ့ ရသည်။ စာရေးသူ၏ ဖခင်မိခင် မျိုးရိုး တွင် ပါးသိုင်းမွှေး မုတ်ဆိပ်မွှေး မရှိကြသဖြင့် အကိုကြီးမှာ နှတ်ခမ်းမွှေး မုတ်ဆိပ်မွှေး နည်းပါးရုံမက ဇာဂနာဖြင့် နုတ်နိုင်ရုံ မျှသာ အရည်အတွက်ရှိလေသည်။ အကိုကြီးသည် သူ၏သူငယ်ချင်းကဲ့သို့အမွှေးဖုံးသော မျက်နာပိုင်ဆိုင်ချင်သောကြောင့် နေ့ စဉ်နှင့် အမျှ ဘရိတ်ဓါးဖြင့် မျက်နှာ အောက်ပိုင်း တခြမ်းလုံးကို ရိပ်ပါသော်လည်း ပါးသိုင်းမွှေး မကြမ်းရုံမက မုတ်ဆိပ်မွှေးလည်း ထပ်မထွက်၊ ဒုံရင်းက ဒုံရင်း အတိုင်းပင် ရှိနေရသကား နောက်ဆုံး လက်လျော့လိုက်ရချေသည်။ မုတ်ဆိပ်ရိပ် ဘရိတ်ဓါးကို စိတ်နာစွာဖြင့် အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ချိုးချေပြီးသကာလ မုတ်ဆိပ်ရိပ် ကိရိယာကို လွှင့်ပစ်လိုက်သဖြင့် စာရေးသူတို့ အတွက် ကစားစရာ တခု တိုးသဖြင့် ၀မ်းသာခဲ့ရ ပါသည်။ သူ ၏ မထွက်လေသော ပါးသိုင်းမွှေး မုတ်ဆိပ်မွှေးများကို ကျေးဇူးတင် သော အလို့ ငှာ ယခု ပို့ စ်ဖြင့် မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြု ပေးလိုက်ရပါသည်။ ဖက်ရှင်မောင်များကို စာရေးသူ၏ အကိုကြီးသာ တွေ့ ပါက မည်သို့ မည်ပုံ စိတ်လှုပ်ရှားမည် ကို မခန့် မှန်းတတ်သော်လည်း စာဖတ်သူ များ ရင်ခုန်သွားချေမည်လော ဟု မှန်းဆနေမိပါသည်။
Posted by ထွန်း at 23:52 23 comments
Posted by ထွန်း at 08:040comments
Ashamed or What'saShame!
အလွန့် အလွန် ....စိတ်ညစ်နေပါသည်။
ဗုဒဘာသာဝင်တိုင်း လူသားစိတ်ရှိသူတိုင်း စိတ်ညစ်နေသည့်အတွက် တခါတလေ အားလုံးအတွက် တဒင်္ကလေး စိတ်အပန်းပြေအောင် ပို့ အသစ်လေး ရေးပေးချင်ပါသည်
သို့ သော်.... စိတ်ညစ်လွန်းလို့မည်သို့ မျှမရေးနိုင်သဖြင့် တာဝန် လစ်ဟင်း သည်ဟု ယူဆမိခြင်း ကြောင့် ပိုစိတ်ညစ်နေပါသည်
ကိုရဲမွန်နှင့် သံယောဇဉ်က မြန်မာနိုင်ငံက မကောင်းသတင်း မှာ လူသိများ ကြော်ကြားခြင်း ကြောင့် ရှက်တယ် တဲ့....။ မှန်ပါတယ် ရှက်သင့်ပါတယ် ..
အမေးခံရတိုင်းရှက်တာနားလည်ပေမဲ့ အမေးတွေ က မေးနေကြအုန်းမှာဘဲ.. ရှောင်လို့ မှ မလွတ်နိုင်တာ..
ရှက်ပြီးရှောင်နေမဲ့ အစား.. စိတ်ညစ်တာအဖော်စပ်ရအောင်.
အခွင့်အရေးလက်လွှတ်မခံဘဲ .. လာမေးသူတွေ ကို UNငြိမ်းချမ်းရေးတပ် မြန်မာပြည်ထဲဝင်လာဖို့..... ၀ိုင်းကူ စာရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါ။ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံသား တွေရဲ့ ဆန်ဒကို ဖေါ်ပြတာ ဆန်ဒပြတာပါဘဲ.
လမ်းလျှောက်မှ ဆန်ဒပြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်လုပ်သွား ပြီး ဆန်ဒဖေါ်ပြကြ ရမှာပါ။
ဥပမာဆိုပါတော့ Shame ဆိုတာ ရှက်မိတာပြောတာပါဘဲ။ What'saShame! ဆိုတာက သနားစရာ ကောင်းတယ် ဂရုဏာသက်စရာ လို့ အဓိပါယ်သက်ရောက်ပြန်ရောဗျ။
ဂလိုဆိုတော့ ရှက်စရာ လာပြောသူများကို သနားစရာ ဖြစ်သွား အောင် .....ကိုယ်နဲ့ ထပ်တူ စိတ်ညစ် သွားအောင် လုပ်ပေးကြရအောင်.. ဒါမှ စိတ်ညစ်တာ အဖေါ်ရမှာ
အသကုန် စိတ်ညစ်နေတယ် ဗျို့......
Posted by ထွန်း at 22:293comments
Please Sing in for Burma/ Myanmar
Kindly please sing in http://www.petitiononline.com/stopspdc/petition.html to save Burmar/Myanmar country and people.
သူငယ်ချင်းတို့ ရဲ့ မေးလိပ်စာထဲက မြန်မာရော နိုင်ငံခြားသားများကိုပါ http://www.petitiononline.com/stopspdc/petition.html သို့ ကူညီစာရေး ပေး ကြဖို့အကူညီ တောင်းကြပါ၊
Posted by ထွန်း at 06:45 1 comments
News - Not twin but born in same day in3week apart
ပထမ လစေ့နေစေ့ အချိန်ပြည့်သော သမီးဦးလေးကို မွေးပြီး နောက် သနွေကို လစေ့ရန် စောင့်ရလေသည်။ ၃ပတ် အကြာတွင် နောက်သနွေမှာ လစေ့နေစေ့ အချိန်ပြည့်ပြီး မွေးနေ့ တရက်တည်းတွင် နောက်ထပ် သမီးလေးကို ဖွားမြင်လေသည်။
Posted by ထွန်း at 21:370comments
Posted by ထွန်း at 22:180comments
Posted by ထွန်း at 05:575comments
News - Are youawise or dull?
Posted by ထွန်း at 20:162comments
News - Ninth of SIX !
Posted by ထွန်း at 11:31 1 comments
Posted by ထွန်း at 18:280comments
News - Is that you in the photo?
Posted by ထွန်း at 09:243comments
News - Cerebrity နံမည်ကြီးချင်သလား နံက်စာဖြစ်ချင်သ...